Ngaba iZalathiso zeSoftware ekwi-Intanethi nguMhlobo weQonga okanye uKhuphiswano? | Martech Zone
Ngaba iZalathiso zeSoftware ekwi-Intanethi nguMhlobo weQonga okanye uKhuphiswano?
Lwesine, Okthobha 26, 2017 Lwesine, Okthobha 26, 2017 Douglas Karr
Umhlobo wam undibuze ukuba ndiphonononge iqonga labo kwindawo yomntu wesithathu kule veki, esithi indawo iqhuba isithuthi esithile kwabanye abathengisi abakwishishini. Ndenze uhlalutyo olukhawulezayo lwesiza solawulo kwaye kuyinyani, bazuze uluhlu oluqinisekileyo kushishino lomhlobo wam. Kubonakala kusengqiqweni ukuba bacele ukuphononongwa ukuze babonakale ngcono kulawulo.
Isikhokelo asiyindawo encinci, inkulu kakhulu. Inobungakanani beenjini zokukhangela, abasebenzi bophuhliso, ukubandakanyeka kwintengiso yemidiya yoluntu, kunye nohlahlo-lwabiwo mali lokuhlawula. Ngenxa yokuba ukugcwala kwayo kunzima kwaye kunokuqhuba ababukeli abaninzi abachaphazelekayo kumaqonga, ikwanayo nenkqubo yentengiso ehlawulwayo ngaphakathi apho umhlobo wam anokuthenga iprofayili ebonakalayo okanye abonise iintengiso kumaphepha afanelekileyo.
Luthini uhambo lokulindela?
Isikhokelo sifumaneka kwiinjini zokukhangela zamagama aphambili ahambelana neqonga.
Injini yokukhangela umsebenzisi ucofa kulawulo apho bafumana iqonga lakho kufutshane nalo lonke ukhuphiswano lwakho.
Abasebenzisi beenjini ezimbalwa zokukhangela bacofa kwinkampani yakho. Uninzi luye lwalahleka kwabo ukhuphisana nabo, ngakumbi ukuba banebhajethi enkulu yentengiso ngaphakathi kulawulo.
Nantsi ingxaki kolu hambo… ayingomhlobo weqonga, ngumkhuphiswano wabo. Iqonga limisa ngenjongo yakho ukubanikezela, ukubaphambukisa kwindawo yabo, ukuze abaphulaphuli benze imali apho. Ukhuthaza umkhombandlela kubasebenzisi bakho ukubeka uphononongo- abakwenzayo- oluphucula umgangatho wokukhangela kulawulo. Ngeli xesha, iqhuba ngokunzulu phakathi kwakho kunye nethemba lakho. Ngoku uxhomekeke kulawulo lokondla ishishini lakho.
Yeyiphi enye indlela?
Wakha ubukho be-intanethi obomeleleyo, obubekwa ngcono kunesikhombisi.
Amathemba atyeshela umkhombandlela kwaye uye ngqo kumxholo wakho, awuzange uveze ukhuphiswano.
Umxholo wakho ofanelekileyo, onyanzelisayo uhendela undwendwe ukuba lukhokele, khokelela kumthengi.
Esi sikhombisi asinathuba lingcono lokukubetha kwiziphumo zeinjini yokukhangela kunokuba usenza, kutheni ungabanceda? Kutheni ungabahlawula, uxhase indawo yabo, kwaye okwangoku, banceda abo ukhuphisana nabo? Ingafana nomntu omi phambi kwivenkile yakho, ukhenketha ithemba ujikeleze ibhloko okhuphisana nabo, emva koko akucele ukuba ubhatale ukuze uqinisekise ukuba babuyela evenkileni yakho. Uya kubakhaba emnyango wakho, akunjalo?
Kuya kufuneka ujonge nasiphi na isibonelelo sendalo njengoko bobabini bengabahlobo kunye nabantu abakhuphisana nabo. Ewe banokuba nethuba lokuqhuba i-traffic engakholelekiyo. Kodwa kuxabisa kwakho. Kuya kufuneka ujonge ukuba ulungile okanye hayi ulungile koloxhomekeko kwaye ukulungele ukuqhubeka nokuhlawulela ukufikelela kuyo zabo abaphulaphuli.
Andiyi. Kwaye andibhalanga uphononongo lweqonga lomhlobo wam.
tags: ngcacisoiirejista zeeapps ezikwi-intanethiisikhombisi se-saas kwi-intanethiiirejista zeqongaiikhomputha zesoftware
Iindlela ezi-5 eziPhezulu zoPhuculo lwenkqubo yeNtlawulo yokuHamba